सुजता कोइराल उपप्रधानमन्त्री बन्दै !
कोइराला परिवारसँग निकटह कतिपयले सुजाताको कदमलाई रुचाएनन् । तर, उनले लिएको निर्णयले सबैभन्दा फाइदा शेरबहादुर देउवालाई नै भयो ।
पुस १८, २०७८ १२:२१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सुजाता कोइरालाले लिएको निर्णय धेरैका लागि आश्चर्यजनक थियो । उनले आफ्नै दाजु डा. शेखर कोइराला सभापतिको उम्मेदवार बन्दा नसघाई प्रकाशमान सिंहलाई सघाइन् । सिंहकै प्यानलबाट उपसभापतिको उम्मेदवार बनिन् ।
कोइराला परिवारसँग निकटह कतिपयले सुजाताको कदमलाई रुचाएनन् । तर, उनले लिएको निर्णयले सबैभन्दा फाइदा शेरबहादुर देउवालाई नै भयो । सुजाताले साथ दिएका प्रकाशमान सिंहले दोस्रो चरणको प्रतिष्पर्धामा देउवालाई साथ दिने घोषणा गरे । उक्त घोषणा हुँदा सुजाता पनि चाक्सीबारीमा देउवा र सिंहको बीचमा देखिएकी थिइन् ।
सुजाता पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुन् । कोइराला परिवारका उनीसहित तीन सदस्य डा. शेखर कोइराला र डा. सशांक कोइरालामध्ये उमेरले शेखरभन्दा कान्छी र सशांक भन्दा जेठी हुन् । तर, राजनीतिमा सुजाता सबैभन्दा पहिले लागेकी हुन् ।